Unai Emery oo Fariin Damqasho leh u diray xiddigiisa Welbeck kaddib markii Xalay loola cararay Isbital – Gool FM
Waxaa la tuhsan yahay inuu ka jabay Canqowga lugta Midig taa uu garoomada uga maqnaan karo inta ka harsan kal ciyaareedkan.
Dhaawaca ayaa sidoo kale wuxuu shaki wayn galinayaa mustaqbalkiisa Arsenal maadaama uu qandaraaskiisu dhacayo xagaagan.
Tababare Unai Emery ayaa Fariin damqasho leh u soo diray xiddigiisa kaddib markii xalay Isbitaal loola cararay.
“Sabab kale oo wayn aan u dagaalano una guuleysano Axada soo socota, Arsenal oo dhan garabkaaga ayay taagan yihiin, waxaan rajeenayaa inaan goor dhow arko dhoola cadeyntaada iyo Tamartaada Danny!.”. Emery ayaa sidaa soo dhigay boggiisa Twitter ka.
Ozil oo Daaha ka rogay Saaxiibka ugu Qaalisan uu ku lahaa Real Madrid iyo kan ugu Codka Macaan dhanka Heesaha